Sorona Masina ny 14/02/2019 - Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 14/02/2019
Fahatsiarovana Md Cyrille sy Md Méthode
Sorona iombonan’ny Mpitondra (Mpamaky lay)
Mpirahalahy i Md. Cyrille sy i Md. Méthode zanaka mpanao raharaham-panjakana tany Tesalônika. Rehefa avy nianatra tao Constantinople izy, dia nirahina nitory ny Evanjely tany amin’ny faritany Moravie.Fa nilatsaka ho mpitoka-monina i Cyrile ary maty tao Rôma tamin’ny 14 febroary 869.
I Méthode kosa dia voatsangana ho Arseveka ary nirahan’ny Papa hikarakara ny tany slaves rehetra. Ka nony maty izy, ny fomba fivavahana fandevenana dia natao tamin’ny teny latina sy grika ary slave.
Talohan’ny nahafatesany dia nitalaho mafy tamin’ny Tompo i Md Cyrille mba « hiray ao amin’ny finoana marina ny firenena rehetra ary mba hiara-miaiky izany finoana izany ».
Dia izany koa no ndeha hangatahintsika amin’izao Sorona masina izao.
Endrey izany hatsaran’ny tongotr’ilay eny an-tendrombohitra mitory sy manambara fiadanana ; mitory hasambarana, manambara famonjena.
Andriamanitra ô, i Masindahy Cyrille sy Méthode mirahalahy no nentinao nanazava ireo firenena slavy, ataovy mahazo ny tena fampianaranao ny fonay ary ataovy vahoaka iray tsy mivaky izahay, ka enga anie ny finoana hampiray anay sy hotananay tsy misy diso hatrany.
Amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Zanakao Tomponay…Amen.
Taratasy faharoa nosoratan’i Md. Paoly Apôstôly ho an’ny krstianina tany Korinto. 4,1-2 ; 5-7
Isehoan’ny herin’Andriamanitra ny fahalemen’ny olona
Ry Kristianina havana, tsy ketraka izahay manana izany fandraharahana izany, araka ny famindram-po natao taminay;sanatriavinay ny zava-mahamenatra atao an-katakonana; tsy mandeha an-kafetsena izahay, na manampoka ny tenin'Andriamanitra; fa asehonay tsotra izao ny marina, ka tonga mendrika hitokian'ny olon-drehetra eo anatrehan'Andriamanitra izahay. Fa tsy tenanay no torinay, fa Kristy Jesoa Tompo, ary izahay dia mpanomponareo noho ny amin'i Jesoa. Satria, Andriamanitra izay nandidy hoe: Aoka ny maizina no hiposahan'ny mazava, no nanazava ny fonay, mba hampahazavanay ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra, izay mitaratra amin'ny tavan'ny Kristy.
Siny tany anefa no itondranay izany rakitra izany, mba hiharihary fa avy amin'Andriamanitra ny halehiben'ny herin'ny Evanjely, fa tsy avy aminay.
-Izany àry ny tenin’ny Tompo. – Hisaorana anie Andriamanitra !
Sal.95 1-3,7-8a, 10
Fiv : Lazao amin’ny faravazan-tany ny zava-mahagaga nataon’ny Tompo
Ihirao hira vao ny Tompo !
Ihirao ny Tompo ry tany tontolo !
Hatramin’ny ranomasina, ka hatramin’ny ranomasina
torio ny Famonjeny mahafaly !
Ambarao ny firenena ny voninahiny,
…ny vahoaka rehetra ny Asany mahagaga !
Omeo ny Tompo, rey fokom-pirenena ;
omeo ny Tompo ny voninahitra sy ny hery !
Eny, omeo ny Tompo voninahitra ny Anarany !
Ilazao ny firenena :-Manjaka ny Tompo !
Izao tontolo izao mafy orina, tsy hihontsona !
Ny vahoaka tsarainy araka ny rariny !... »
Na : Dera sy haja ho Anao, ry Jesoa Tompo (Raha Karemy)
Ny voa dia ny tenin’Andriamanitra
ary ny mpamafy dia i Kristy :
Izay mahita Azy dia miorina mandrakizay.
+ Evanjely Masina nosoratan’i Md.Marka
Mamokatra be ny fafy latsaka tamin’ny tany tsara
Tamin’izany andro izany nampianatra teo amoron-dranomasina indray i Jesoa ka nisy vahoaka betsaka nitangorona teo aminy, izy moa niakatra nipetraka teo an-tsambo kely teo ambonin’ny ranomasina, ny vahoaka rehetra kosa teny amoron-dranomasina. Ary nampianatra azy zavatra maro tamin'ny fanoharana izy, ka nilaza tamin'ny fampianarany hoe: Mihainoa: Indro niainga hamafy ny mpamafy, ka nony namafy izy, ny sasany latsaka teny amoron-dàlana, dia tonga ny voro-manidina ka nitsindroka azy. Ny sasany latsaka tamin'ny tany be vato sy marivo nofo, ka nitsimoka vetivety satria tsy nisy tany lalina; fa nony niposaka ny masoandro, sady nasian'ny hainandro izy no tsy latsa-paka ka maina. Ny sasany latsaka tany anaty tsilo, ary nitombo ny tsilo ka nangeja azy, dia tsy namoa izy. Ary ny sasany latsaka tamin'ny tany tsara, dia naniry sy nitombo ary namoa, ka ny sasany avo telopolo heny, ny sasany avo enim-polo heny, ny sasany avo zato heny. Ary hoy izy: Izay manan-tsofina hihainoana, aoka hihaino.
-Izany àry ny tenin’ny Tompo. – Dera anie ho Anao ry Kristy !
Ambino vavaka izahay , ry Ray, ary afaho amin’ny fahotana rehetra ka rehefa hamasinin’ny fahasoavanao dia enga anie hodiovin’ny Sorona atolotray.
Mandehana eran’izao tontolo izao, mitoria ny Evanjely, fa indro Aho eo aminareo mandrakariva, hoy i Jesoa.
Vavaka aorinan’ny Kômonio
Ry Tompo Andriamanitra ô, ny Sakramenta noraisinay anie hampiroborobo ny finoana ao aminay dia ilay finoana nampianarin’ny Apôstôly ary notandrovan’i Masindahy Cyrille sy Méthode tety an-tany.
Amin’ny alalan’i Kristy Tomponay.Amen
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.3712 s.] - Aidé par Evanjelyanio.org